आफ्नो निवास ‘सोत्तर’ हुँदा प्रधानमन्त्री किन मौन ? कसले पार्‍यो त्यस्तो ‘सोतर’ ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
२६ seconds अगाडि
आफ्नो निवास ‘सोत्तर’ हुँदा प्रधानमन्त्री किन मौन ? कसले पार्‍यो त्यस्तो ‘सोतर’ ?
कोरोना भाइरसका सम्वन्धमा यो ‘सोतर’ भन्ने शव्द प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै र आफ्ना नागरिकहरु प्रति प्रयोग गरेका हुन । कुनै मान्छे घरफर्कन लाग्दा उसले गाउँनै सखाप पार्ने सन्दर्भमा जे भने त्यो विझाउने खालको थियो । यतिबेला उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा जस्तो देखियो, भोटियो तयसको समुच्च अवस्था यही ‘सोतर’ ले जनाउने भयो । यो निवासमा ७० भन्दाबढीको सख्यामा कोरोना प्रवेश गरेको अवस्थालाई बुझाउन अहिले यसको प्रयोग हुन थालेकोछ ।
बैशाखको पहिलो साता (६ गते) सरकारी माध्यमलाई अन्तर्वाता दिँदा गाइ बस्तुलाइ ओछ्याउने झारपतिगर चिनाउने यो वस्तु मान्छेमा प्रयागे भएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट । त्यो वार्ता क्रममा भएको प्रश्नोत्तरको एउटा अंश –
पत्रकारको प्रश्न : भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीको उत्तर : ‘स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ ।
केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानरबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने? हामी भारतको संक्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो ।’
के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिप्रश्नको उत्तर यतिबेला गाउँले भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारले नै खोजिरहेकोछ । यो निवासमा विभिन्न भूमिकामा रहेका मान्छेहरुको सख्या कतिहोला त्यो आफनो.ठाउँमा छ । तर यो निवासको कडारुपको पर्खाल भित्र मात्रै ७० भन्दाबढीको सख्या संक्रमितभएको भेटियो । वताइए अनुसार परीषण भएको १६५ को सख्याबाट यो ७० को सख्या देखिएको हो ।
सुखद पक्ष के रह्यो भने यो परीक्षण प्रतिवेदन आउँदासम्म प्रधानमन्त्री दम्पत्ति सुरक्षित छन । तर अरु त प्रायः सबै संक्रमणमा परेको अनुमान छ । जो संक्रमितभए तिनको शीघ्र स्वास्थ्यभालको कामना गरौं ।
आफनो निवासमा यति ठूलो सख्या ‘सोत्तर’ हुदा प्रधानमन्त्री किन मौन ? कसले पार्‍यो त्यस्तो सोतर ? किन लुकाइदैछ त्यसको स्रंोत ? निवासको व्यवस्थापनमा कमजोरी कसको भयो ? जव प्रधानमन्त्रीको निवासनै यस्तो असुरक्षित हुन्छ भने यस्तो सरकारले देशको सुरक्षा कसरी गर्ला ? यस्ता प्रश्नहरु आम रुपमानै उव्जिरहेका छन र ती निरुत्तरित नै रहेका छन् ।
कोराना प्रति प्रधानमन्त्री
कोरोना संक्रमणकाबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा प्रति आम नागरिक पहिलेदेखि नै विश्वस्त हुन सकेका थिएनन । कोरोना केही होइन, हाच्छिउ गरे आफै जान्छ र बेसारपानी देखायदिएपनि यो भग्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीबाट जतिपटक आए तिनले प्रश्न उठाउका थिए । देशको सबभन्दा उच्चपदाधिकारीकोे सरकारी निवास कोरोनाले प्रवेश गरको पुष्टी भएको अवस्थाले र त्यो पनि धेरेनै ठूलो मात्रामा रहेकोले आम मानिसमा एक प्रकारको त्रास हुने नै भयो । प्रधामनमन्त्री निवास बालुवाटार देशको सबै भन्दा सुरक्षित मानिएको र सधैँ अतिनै कडारुपको सुरक्षा घेरा रहने ठाउँ हो ।
प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबेगर यो ठाउमा हावापनि छिदैन भनिन्छ । यो ठाउँ अर्थात निवासमा १६५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ७० को हाराहरी सख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्था सामान्य होइन नै ।
यसको अर्थ हो कि प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म गलत मान्यतामा रहेछन कि उनले मनलाग्दी गरे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो मान्यता धेरै ठाउँमा, धेरै पटक नै आउ वा आइरहे । मुख्यमन्त्री सँग भएको वार्तालापदेखि संसदमा गरिएको सम्वोधनसम्मा पनि बेसारले कोरोना भगाउने कुरा दोहोरिरहेका थिए ।
गएको भदौ १३ मा एउटा टेलिभिजन च्यानल (प्राइमटाइम) लाई अन्तर्वार्ता दिदा पनि बेसार देखादिए कोरोना भाग्छ भनी जोड दियएको छ । पहिले बेसारपानी खानेकुरा आउथ्यो भने देखाउने कुरा आयो । त्यसको उदाहरण दिदै वोसार दलेर सातदोवाटोमा पन्साउने गरिएको थियो । त्यसपछि संविधान दिवसमा गरिएको भाषण चर्चामा आयो । प्रधानमन्त्रीको खासगरी कोरोनाका बारेको बोली धेरै पातलो भएरनै होला बालुवाटारमा नै पत्याउन छाडिएको देखियो । विवरणहरु त्यसै भन्छन् ।
दुइ जनामा एक संकमित
प्रधानमन्त्रीका प्रस संयोजकले वताए अनुसार त्यसबेला निवासमा १६५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ७० को हाराहरी सख्यामा कोरोना संक्रमण देखियो । सरकारी स्वामित्वको कुनै एक ठाउँमा गरिएको एकडेढ सय सख्या हाराहारीको परीक्षणमा पौनेसयको परीक्षण परिणाममा भाइरस संक्रमण भएको देखिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । अहिलेसम्म जतिको परीक्षण भयो र जति संक्रमित देखिए त्यसबाट भन्न सकिन्छ यो परीक्षणमध्येको पुगनपुग दुइजनामा एकजना संक्रमित भएको अवस्था हो । संसारभरी यस्तो परिणाम आउनु सबभन्दा खतरनाक मानिन्छ ।
छिमेकी देश भारतको दिल्ली र मुम्वइका सुकुम्वासी बस्तीमा यस्तो देखिएला भन्ने डर थियो । तर ती ठाउमा पनि अपवादबाहेक हजारमा सयको हाराहारीमा नै थियो । बालुवाटारमा जे भयो त्यो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो यो १० लाखमा ३० हजार दरको परीक्षण र त्यसमा प्रतिहजार १०० कादरले संक्रमण भेटिएको अवस्था हेइन यो । त्यसकारण यसलाई गम्भीर भनिएको हो । प्रधानमनत्रीले १० लाखमा ३० हजारको परीक्षण गरिएको भनेका छन् । सरदरमा अहिलेसम्म एकहजारमा एकसयको दरमा छ संक्रमण भेटिने क्रम । प्रधानमन्त्री निवासले त्यसकारण रेकर्ड तोडिएको मानिएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पर्खाल भित्र पाइएको वा प्रकटभएको यो सख्या थोरै धेरै देखिएको देशैभरी अहिलेसम्मको रेकर्ड हो । विज्ञहरुका अनुसार देशभरी यही रफ्तारमा संक्रमण फैलने हो भने त्यसको सख्या एक सवाकरोड पुग्नेछ । यतिबेलाको चिन्ता हो कतै देशको कार्यकारी प्रमुखको निवासले यस्तो थालनी त गरेको होइन ? केही पहिले संसदमा करिव पाँचसयको हाराहारीमा परीषण हुदा एकजनामा पनि संक्रमण भेटिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको दावी भन्दा भिन्न
यो ठाउमा प्रधानमन्त्रीले गरको एउटा सम्वोधन उललेख हुनु आवश्यक ठानियो । छैठौं सविधानदिवसका अवसरमा असौज ३ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारी विरुद्ध यो समयमा देशमा व्यापक रुपले जनचेतना फैलाइएको र आजको दिनसम्म यसका बारे सबै पर्याप्त जानकारी राख्ने भैसकेका भनी घोषणा गरेका थिए । तर निवासमै त्यस्तो जानकारी भएन वा राखिएन छ । तयसकारण यसकोकारण खोज्न आवश्यक मानिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको दावीलाई निवासमा प्रकट भएको कोरोना संक्रमणको यो सख्याले आफैजवाफ दिन्छ । प्रधानमन्त्रीका दावीको केही अंश :
‘बहुसंख्यक नेपालीहरूलाई कोभिड–१९का लक्षण तथा हात धुने, भिडभाडबाट टाढा रहने, मास्क प्रयोग गर्नेजस्ता रोकथामका उपायहरूबारे जानकारी छ । मोवाइल रिङ्ग टोन, टोल फ्री हटलाइन फोन, वेवपोर्टल, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दैनिक ब्रिफिङबाट स्वास्थ्य जनचेतना तथा जोखिम बारेको सूचनाप्रवाह गरिएको छ ।’
‘समग्रमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा कोरानालाई तह लगाउन सकिनेमा हामी विश्वस्त थियौं । हामीले लकडाउन गर्‍यौं । सर्वपक्षीय सल्लाह गर्‍यौं, सल्लाहमै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि क्षमताले भएसम्मका उपायहरूअपनायौं । हामीले ‘जनताको जीवन रक्षा पहिला’ भन्ने नीति अगाडि सार्‍यौं । उपलब्ध नयाँ तथ्यका आधारमा जनतालाई सचेत पार्ने हरसंभव प्रयास गर्‍यौं । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पटकपटक औपचारिक सम्बोधन गरें । मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अपरेसन थियटरमा जानुअघि र अस्पातालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै पनि सम्बोधन गरें । यी सबै सम्बोधनमार्पmत गरिएका काम र गर्ने कामका बारेमा आम देशबासीसँग सम्वाद गरें । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय समयमा हात धुने मात्रै होइन, आप्mनो आन्तरिक रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गरी सिङ्गो मुलुकलाई ‘निरोगी नेपाल अभियान’मा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएँ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबै प्रकृतिका कामदार÷कर्मचारीहरू, तीनवटै तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकहरूको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको यस राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय संलग्नता रह्यो, जुन खुशीको कुरा हो ।’
‘पहिले परम्परागत औषधि आदिका बारेमा द्विविधा थियो, अहिले हाम्रा जडिबुटी र परम्परागत वस्तुहरूको प्रयोगबाट आपूm निको भएको भनेर कतिपय संक्रमितहरूका अनुभव पनि सुन्न थालिएको छ ।’
सल्लाहाकार कस्ता ?
प्रधानमन्त्रीको निवासमा विभिन्न भूमिकाममा रहेकाहरुले यो संक्रमण देखिएको (१७ असौज) १५ दिन अघिमात्र प्रधानमन्त्रीले जनताका नाममा गरेका यो सम्वोधन कि सुनेनन कि अटेर गरे भन्ने देखाउछन यी विवरणले । त्यसो नहँुदो हो त देशभरीकै लागि संक्रमणमुक्त क्षेत्र भनी नमूना बन्नुपर्ने, परीक्षण गरिदा अपवादमा एक दुईजनामा हुनुपर्ने कुरा सबैमा सर्लप्पै कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठछ नै । यो भनेको नमुना त हो तर सबै भन्दा बढी संक्रमित भेटिएको ठाउँ भन्नेमा रह्यो ।
संक्रमण भोटिएका कस्ताकस्ता छन भन्नेले पनि अर्थ राख्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, विदेश मामिला सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिवहरु परे । यी पदमा कोको थिए भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यस अघि बालुवाटार भित्रकै फोटोग्राफर मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक पनि कोरोना देखिएकोमा परेका थिए । यो समूह भनेको प्रधानमन्त्रीको धेरैनै निकट रहने समूह हो । उनीहरु आफैले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरुलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन । अर्थात आरोप लगेका होकि भन्ने ठाउँ पनि रहेन ।
सुरक्षा घेरा उस्तै
यो राजनीतिक समूहमात्र होइन प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षामा खटिने भित्री घेरामा रहेका सुरक्षाकर्र्मीहरुको पनि ठूलोसख्या संक्रमित भएको देखियो । यसमा नेपाली सेनाका २८, नेपाल प्रहरीका १९ र सशस्त्र प्रहरीका १८ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई जना गरी ६७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो । अहिलेसम्म सरकारी घेरामा अर्थात सुरक्षाको यति कडा व्यवस्था भएको ठाउँमा एकैपटक यतिठूलो सख्यामा संक्रमण देखिनुले प्रधानमन्त्री निवासमा कोरोनाको सतर्कता कस्तो छ भन्ने पक्षबाट प्रश्न उठने भयो नै ।
स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ र सुरक्षा सधैँ धेरैनिकट रहने समूह हो । यसमध्ये स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र विज्ञ पधानमन्त्री आफैले छानेका व्यक्ति–पदाधिकारी हुन । त्यसकारण खोट कतै भए प्रधानमन्त्रीमै देख्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षित भएको झुठो दावी
यही नेर हो प्रधानमन्त्रीले ‘बहुसंख्यक नेपालीहरूलाई कोभिड–१९का लक्षण तथा हात धुने, भिडभाडबाट टाढा रहने, मास्क प्रयोग गर्नेजस्ता रोकथामका उपायहरूबारे जानकारी छ’ भनी प्रधानमन्त्रीले गरको दावी झुठो रहेछ । प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारलाई यस्तो जानकारी रहेनछ भनने बालुवाटार भित्रको यो घटना आफै वताउँछ । रहेनछ भन्नुपरेको ठाउँ पनि । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले नै भनेको ‘मोवाइल रिङ्ग टोन, टोल फ्री हटलाइन फोन, वेवपोर्टल, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकाका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दैनिक ब्रिफिङबाट स्वास्थ्य जनचेतना तथा जोखिम बारेको सूचनाप्रवाह गरिएको छ’ भन्ने दावी पनि झुठोनै भयो ।
बालुवाटारमा यसप्रकारले अपवादमा जोगिएका बाहेक सबैमा कोरोना प्रवेशको यो सन्देश सामान्य छैन । यही ठाउँमा परीक्षण बढाउ भनिरहिँदा आफनो क्षमताको आधामात्र पनि प्रयोग नगरेको परिणाम देशले कसरी भुक्तान गरिरहेको छ भन्ने चित्र देखिन्छ ।
त्यही सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीले परीक्षणको क्षमताका बारे भनेका थिए – ’२०७६ माघ ९ गते कोभिड–१९ को पहिलो केस पहिचान हुँदा पिसिआर परीक्षण देशभित्रको प्रयोगशालामा संभव नभएकाले त्यसको नमूना विदेश पठाउनु परेको थियो । हाल देशभित्र सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पिसिआरपरीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन् । परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार ५०० भन्दा माथि छ ।’
यो क्षमताको प्रयोग भएन भन्ने त बालुवाटारमा यो सख्यामा प्रकटभएको दिनको मात्रै परीक्षण सख्या हेरियो भनेपनि पर्याप्त होला । त्यसदिन १२ हजार हाराहारीको परीक्षण भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने अनुसारको क्षमता यो दिनपनि प्रयोग भएन अर्थात क्षमताको ११ हजार खेरगयो । विज्ञहरुले सधैभरी यस्तो प्रश्न उठाइरहेका छन तर मानिएको थिएन र छैन पनि ।
अर्को, एकहप्ता अघि निवासमै दुइजनामा कोरोना देखिएको थियो । तर बाँकीको तत्काल परीक्षण गरिएन । अहिलेसमम बालुवाटारको यो संक्रमणको स्रोत खुलेको छैन । अनुमान छ ती दुइजनाबाट यो ७० जनामा सर्‍यो । यहीबाट अनुमान गरौं यो ७० बाट कतिजनामा सरेको होला । यो दिनमात्रै होइन विगतका सधैँभरी यस्तै भैरहेको हुनुपर्छ । यसअघि निवासमा कोरोना प्रवेश गरेको भन्ने संकेत प्राप्त भैसकेको पद हो प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक । उनीबाटैपनि बाँकीलाइ तत्काल परीक्षण गरौंभन्ने सुझाव आएन वा आएको सुझाव मानिएन । कुरा जेहोस परिणामचाहिँ डरलाग्दो छ ।
प्रकाशित मिति : आश्विन २०, २०७७ मंगलबार ५ : २६ बजे
घनश्याम भुषालले फेरि गरे ओलीलाई गाली !
यसपालिको चुनावमा केपी ओलीको उखान टुक्का र भाषणले कतै जितेन
एमालेको पनि भरतपुरको मेयरमा रेणुलाई भोट !